यसकारण सिटिईभिटी समाज, देश र समृद्धिको मेरुदण्ड हो - यसकारण सिटिईभिटी समाज, देश र समृद्धिको मेरुदण्ड हो
यसकारण सिटिईभिटी समाज, देश र समृद्धिको मेरुदण्ड हो
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २१ पुष, 10:08:45 PM
पुष्परमण वाग्ले सिटिईभिटीका सदस्यसचिव हुन् । प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिममा २६ वर्ष लामो अनुभव हाँसिल गरेका वाग्ले पोखरा विश्वविद्यालयबाट वातावरण व्यवस्थापनमा स्नातोकोत्तर हुन् । उनी प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिममा भारतबाट मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधीबाट समेत सम्मानित छन् । IAAS TU बाट कृषिमा ब्याचलर गरेका उनले सिटिईभिटीमा प्रशिक्षकबाट करियर सुरु गरेका हुन् । उत्कृष्ट कार्यक्षमता र प्रदर्शन गरेवापत् शिक्षा मन्त्रालयबाट २ पटक पुरस्कार प्राप्त गरेका वाग्लेले बेरुजु फस्र्योटका लागि समेत पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गरेका छन् । उनै वाग्लेसँग नेपाल बहस डटकमका लागि सन्तोष खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
बिचौलियाहरुले फैलाएको २ प्रतिशतको भ्रमले गर्दा हामीले गरेका ९८ प्रतिशत राम्रा र प्रशंसनिय कामहरु छायाँमा परेकाछन् । जसले सिटिईभिटीलाई बद्नाम पार्ने काम भएको छ । प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमाको नयाँ सम्बन्धन दिने काम नै भएको छैन तर मिडियामा यस्ता समाचारहरु किन आइरहेको छ ? पूर्वाधार तयार गरेकाहरुलाई पनि यो र त्यो कारणले भनेर सम्बन्धन दिन सकिएको छैन । अब तपाई मलाई स्वतन्त्र भन्नु हुन्छ कि ? बाँधिएको ? हाम्रो बहस भनेको नै सम्बन्धन दिने र नदिने भन्नेमा नै केन्द्रित भयो । बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मरेर काम गर्यो, जस पाइँदैन । मिडियामा नकारात्मक कुरा मात्रै आउँछ । अनि हामी कुन हौसलाले काम गर्ने ? मैले बदमासी गरेँ भने मलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र छ । बिचौलियाको पछि र हल्लाको पछि लाग्ने काम बन्द गर्नु जरुरी छ । म मिडियाकर्मी साथीहरुलाई आग्रह गर्छु । चलखेल कहाँ भएको छ पत्ता लगाउन र कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन सहयोगको अपेक्षा गर्छु ।
सिटिईभिटीको मुख्य उद्देश्य के हो ?
हाम्रो उद्देश्य भनेको आधारभूत मध्यमस्तरिय दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र औपचारिक अनौपचारिक सीप सिकेकालाई स्तरिकरण, प्रमाणिकरण गर्ने ,जसले राष्ट्रका लागि आर्थिक र सामाजिक उन्नती गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने काम गर्छ ।
सिटिईभिटीको भविष्यको योजनाहरु के–के छन् ?
नेपालमा उपलब्ध प्रकृतिक स्रोत साधनहरुकोे प्रयोग गर्ने । त्यसका माध्यमबाट मानवजीवनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक तथा सामजिक सुविधाहरुको परिपुर्ती विज्ञान प्रविधिले गर्छ । यसका लागि प्रविधिमा खेल्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर सामाजिक आर्थिक रुपमा देशलाई समृद्धितिर आगडि बढाउने हाम्रो योजना छ । जनताहरुलाई उत्कृष्ट सेवा र उत्पादकतत्व वृद्धि गर्ने विभिन्न योजनाहरु लिएर अगाडि बढिरहेका छौं ।
सदस्यसचिवको नाताले यस संस्थालाई अगाडि बढाउने तपाईंको भिजन र एजेण्डाहरु के–के छन् ?
वर्तमान समयमा देश संघीय संरचानामा गएको छ । स्थानिय तह, प्रादेशीक तह र केन्द्रीय तहमा विभाजन भएको छ । नेपाल प्रकृतिक स्रोत साधनको प्रचुर मात्रामा संम्भाना भएको देश हो । त्यसैले ती प्रकृतिक स्रोत साधनहरुको दिगो सदुपयोग तथा प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने र व्यापक हिसाबले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना छ । १ अर्ब १५ करोडको कागती वार्षिक नेपालमा आयात भएको तथ्यांक छ । नेपालमा कागती मात्रै रोप्न सकियो भने पनि आर्थिक रुपमा आगाडि बढ्न सकिन्छ ।
रोजगार उन्मुख शिक्षा स्थानीय तह, प्रादेशिक तह, केन्द्रिय तहमा फैलाउने । डिप्लोमा वा एसएलसी उत्तिर्ण गराएर देशव्यापीरुपमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने । त्यसखालका कार्यक्रम लैजाने र सबैसँग समन्वय गर्ने । देशव्यापी रुपमा अगाडि बढेर आर्थिक रुपमा देशलाई समृद्ध बनाउने योजना छ ।
नेपालमा व्यवसायिक शिक्षाको जनचेतना निकै कम भएको देखिन्छ नि । किन होला ?
नेपालमा श्रमको कदर छैन । किनभने जातका आधारमा श्रम विभाजन गरियो । परापूर्वकालदेखि श्रमका बारेमा सोच्ने तरिका अझैपनि परम्परागत नै रहेको छ । श्रम गर्नेलाई तल्लो दर्जामा राख्ने चलन रह्यो । त्यही सोच्ने शैलीको अवशेष वर्तमान समयमा पनि बाँकी छ । पछिल्लो समयमा तुलनात्मक रुपमा शिक्षा विषय पढेर विद्यार्थीहरु बेरोजगार छन् । तर, सिटिईभिटीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अपवादबाहेक सबै विद्यार्थीले रोजगारी पाउने गर्छन् । तरपनि सिटिईभिटीमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरुको संख्या न्युन नै छ किनभने श्रमको कदर गर्ने संस्कार छैन ।
सर्वप्रथम त श्रमको कदरका बारेमा पहिला जनचेनता फैलाउन आवश्यक छ । श्रमका विषयमा जनचेतना फैलाउन पहिला घर, परिवार, विद्यालय, समाजमा आवश्यक छ । विकसित मुलुकहरुमा श्रमको कदर हुने हुँदा ती देशहरु आर्थिकरुपमा तीव्र गतिमा अगाडी बढेको देख्न सकिन्छ । जस्तै उदाहरणको लागि विकसित मुलुकका कार्यालयका व्यवस्थापक वा मेनेजरले भुइँपनि आफैँ सफा गर्छन्, सिसा आफैँ पुछ्ने गर्छन् तर नेपालमा भने हाकिम भएपछि गिलासमा पानी राख्नपनि अर्को मान्छे चाहिन्छ । त्यसैले नेपालमा श्रमको कदर हुँदैन । श्रमको कदर सिटिईभिटीले मात्र गर्ने गरेको छ ।
सिटिईभिटी स्वायत हुने कि, शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य विश्वविद्यालयको छाता संगठन अन्तर्रगत रहने भन्ने बहस र विवाद चलिरहेको छ । के भन्नु हुन्छ ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबहालीको क्रममा आगामी २ वर्ष भित्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सीटिईभिटीबाट मान्यता प्राप्त संस्थाहरु खोल्ने उदघोष गर्नुभएकोे थियो । सोही अनुरुप सीटिईभिटीबाट अनुमती लिएर सामुदायिक र आङ्गिक विद्यालय, क्यापस गरी २ सय ९२ स्थानिय तहहरुमा विस्तार गरिएको छ । राज्यले अहिले सीटिईभिटीलाई आवश्यक पनि ठानेको छ । वर्तमान समयमा एसएलसी र डिप्लोमा गरि ८ सय ७६ वटा स्कुलहरु छन् । हामीसँग साझेदारी ५, आगिंक ४५, सरकारी ३ सय ९७ वटा, निजी ४ सय २९ वटा विद्यालय छन् । हाल निजी विद्यालयहरुलाई स्वीकृति दिइएको छैन । तर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा र मापदण्ड पुगेको आधारमा विद्यालयहरु खोल्न दिइन्छ । यसैले सीटिईभिटीलाई विद्यालय, विश्वविद्यालयमा पनि राख्न हुँदैन । सरकारले छुट्टै स्रोत, साधन र बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।
सिटिईभिटीले निजी विद्यालयलाई अनुमती दिएको छैन् । नयाँ सम्बन्धन दिने कुरा बेला बेलामा विवाद हुँदै आएको छ । किन ? समाधानका उपायहरु के हुन सक्छ ?
मापदण्डका आधारमा अनुमती दिने गरिन्छ । सम्बन्धन दिदा पहिला आवेदन माग गछौं । संम्भाव्यता अध्नययन गर्ने गछौँ । मापदण्ड अनुसार छ भने अनुमती दिने गर्छाैँ । त्यसपछि हाम्रो टोली गएर राम्रो छ, आवश्यकता छ, रोजगारीको सुनिश्चितता छ भने विकासका पुर्वाधारहरु पुरा गर्न हामी पत्र पठाउँछौँ । त्यसपछि पुर्वाधार विकास गरिसकेपछि विज्ञको टोली अध्ययन गर्न जान्छ । अनि विज्ञहरुको अध्ययनको आधारमा मात्रै सम्बन्धन दिने गछौं । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर निजीलाई सम्बन्धन दिँदा पनि जनताहरुका बीचमा चलखेल भयो भन्ने आरोप लागेको छ । बिचौलियाहरुले नै त्यस्तो आरोप र भ्रामक कुराहरु फैलाउने काम भएको छ । यदि प्रक्रिया पुरा गरेको खण्डमा निजी विद्यालयहरुलाई पनि सम्बन्धन हामीले दिन्छौं । पहिला सरकारीलाई प्राथमिकता दिने हो । यदि नेपाल सरकारले गर्न नसकेको खण्डमा निजीलाई सम्बन्धन दिइन्छ । निजीलाई सम्बन्धन दिँदा बढी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । हामी सम्बन्धनको प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने सोचमा छौँ । मापदण्ड र गुणस्तर सुनिश्चित हुनु जरुरी छ ।
सिटिईभिटीका लक्षित वर्ग को–को हुन् ?
मानव जीवनसँग सम्बन्धित भौतिक र सामाजिक आवश्यकता पुरा गर्ने, र सरोकार राख्ने विषयमा अध्ययन गराउने संस्था सिटिईभिटी हो । त्यसैले यहाँ अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी चलाख हुनुपर्छ । तर हामी प्रश्न गछौँ ? कस्ताले पढ्ने ? फेल भएकालाई भर्ना किन नलिने ? समाजबाट यहाँ व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका बारेमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्र्थीहरुको प्रमाण पत्र तल्लो तहको हुन्छ भन्ने छ । तर, त्यो होइन । यो भ्रम हो । सिटिईभिटी समाजको र देशको समृद्धिको मेरुडण्ड हो । त्यसैले उत्कृष्ट विद्यार्र्थी वर्गको आश्वयकता पर्छ । राम्रा सोच र राम्रो भविष्य बनाउने विद्यार्र्थी वर्गहरु यहाँ आउने गर्छन् । विशिष्ट खालको सिप तथा प्राविधिक ज्ञान फैलाउनु पर्छ सबै वर्गको अनुकुलता रहन्छ । जसका माध्यमबाट वार्षिक १.६ अर्बको कृषि सम्बन्धि आयातलाई रोक्न र समृद्धि र विकासको लक्ष्यलाई हाँसिल गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि छुटै खालको तालिम दिने व्यवस्था गर्न सकिँदैन ?
संघियता अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा रहेका आंगिक क्यापसहरु मध्ये स्तरउन्नती गरेर एउटालाई नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालयमा विभिन्न प्रकारका तालिम दिने व्यपस्था गर्ने योजना बनाएको छौ । यसवर्षको अन्तिमतिर अध्ययन पुरा गरेर विभिन्न तहमा कुन सीपको आवश्यकता हो त्यही अनुसार विदेश,स्देश रहेको युवालाई तालिम सिटिईभिटीले दिने भएको छ । नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय बनाउनका लागि संम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । स्थानिय राष्ट्रिय र अन्तर्रास्ट्रिय तहमा कस्तो खालको तालिमको आवश्यकता पर्छ । यही अनुसार हामीले तालिम दिने छौं । सम्पुर्ण कार्यक्रम एउटै छाताबाट दिने उदेश्यका साथ अगाडि बढेका छौं ।
पहिला सञ्चालित कार्यक्रम र अहिले सञ्चालित कार्यक्रममा के के फरक छ ? टी एसएलसी जस्तो फरक कार्यक्रमको आवश्यकता किन पर्यो ?
९ देखि १२ कक्षाको शिक्षा भनेको दिमाग चलाउने ज्ञान हो । । ज्ञानलाई दिमागबाट दिमाग (mind to mind) मा स्थानान्तरण गरिन्छ । सिटिईभिटीले दिने ज्ञान, सिप भनेको हातबाट हात (Hand to hand)मा जाने सिप हो । वर्तमान समयमा दिमाग चलाएर ज्ञान प्राप्त हुदैन । हातको सिप भए पछि व्यक्ति रोजगार हुन्छ । कोरा ज्ञानलेमात्रै व्यक्ति बेरोजगार हुन्छ । त्यसैले ज्ञान व्यवाहारिक हुनुपर्छ । म रामपुरबाट बि.एस.सी.ए.जी गरेको मान्छे तर मैले जाँच दिदा कापीमा धेरै काउली फलाएँ अनि यहाँ आएर प्रशिक्षकको रुपमा व्हाइट बोर्ड र ब्ल्याकबोर्डमा धेरै काउली फलाएँ । तर खेतबारीमा फलेन । हाल विद्यार्थीलाई भने व्यावाहिक रुपमा सिकाएको छु । कम्पोष्ट मल बनाउने र खेतबारीमा नै काउली फलाउने काममा उत्प्रेरित गरेको छु । त्यसैले सिटिईभिटीको ज्ञान भनेको व्यवहारिक र व्यवसायिक छ । सिटिईभिटीको ज्ञान विज्ञान जस्तै हो जुन हातदेखि हात सिधा हस्तान्तरण हुन्छ ।
सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्दा कतिको स्वतन्त्रता पाउनुभएको छ ?
स्वतन्त्रता भनेको ऐन, नियम र विनियम अनुसार चल्ने हो । कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप छैन । नियम अनुसार काम गर्ने हो । परिषद्ले निर्णय गरेका कामहरु हामीले गर्ने हो । यसको अध्यक्ष शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले पनि राम्रो योजना लिएर आउनुस कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चासो राख्नुभएको छ । उहाँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । राम्रो काम गर्नको लागि निर्देशन दिनुहुन्छ । जहाँसम्म निजीलाई सम्बन्धन दिने कुरा छ, हामी बिचौलियाको भ्रमबाट टाढा हुनुपर्छ र सम्बन्धन दिने र लिने दुवै पक्ष स्पष्ट हुनुपर्छ । सिटिईभिटीले प्रसंशनिय काम गरेको छ । जस्तै प्राविधिक एस एल सी १ लाख ७७ हजार जनाले उत्तिर्ण गरेका छन् । डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहमा ५६ हजारले पास गरिसकेका छन् । अहिले हामीसँग भर्ना क्षमता ६० हजार ८ सय ६९ जना छ । डिप्लोमामा ४२ वटा पाठ्यक्रम छ । छोटो अवधिको पाठ्यक्रम १ सय ९० वटा छ । औपचारिक र अनौपचारिक सिप प्रमाणिकरण गर्ने केन्द्र २ सय ९० वटा छन् । १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ती र विशेष छात्रवृत्तीको व्यवस्था छ । १ लाख ७७ हजार स्वास्थ क्षेत्रको प्राविधिक जनशक्तिमध्ये ८० हजार बढी सिटिईभिटीले उत्पादन गरी मातृशिशु मृत्युदर घटाउन योग्दान गरेको छ । राष्ट्रको लागि योग्दान गरेको सिटिईभिटीको छुट्टै अस्तित्व हुनुपर्छ । अन्य आयोग बनाएर यसलाई गाभ्ने वा हाल्ने हो भने सिटिईभिटीको के काम ? आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गरेर स्वास्थ, कृषि, होटलम्यानेजमेन्ट र इन्जिनियरिङका कार्यक्रमहरु सिटिईभिटीले संचालन गर्छ ।
बिचौलियाहरुले फैलाएको २ प्रतिशतको भ्रमले गर्दा हामीले गरेका ९८ प्रतिशत राम्रा र प्रशंसनिय कामहरु छायाँमा परेकाछन् । जसले सिटिईभिटीलाई बद्नाम पार्ने काम भएको छ । प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमाको नयाँ सम्बन्धन दिनेकाम भएका नै छैनन् तर मिडियामा यस्ता समाचारहरु किन आइरहेको छ ? पूर्वाधार तयार गरेकाहरुलाई पनि यो र त्यो कारणले भनेर सम्बन्धन दिन सकिएको छैन । अब तपाई मलाई स्वतन्त्र भन्नु हुन्छ कि ? बाँधिएको ? हाम्रो बहस भनेको नै सम्बन्धन दिने र नदिने भन्नेमा नै केन्द्रित भयो । बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ६ बजे सम्म मरेर काम गर्यो जस पाइँदैन । मिडियामा नकारात्मक कुरा मात्रै आउँछ । अनि हामी कुन हौसलाले काम गर्ने ? मैले बदमासी गरेँ भने मलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र छ । बिचौलियाको पछि र हल्लाको पछि लाग्ने काम बन्द गर्नु जरुरी छ । म मिडियाकर्मी साथिहरुलाई आग्रह गर्छु । चलखेल कहाँ भएको छ पत्ता लगाउन र कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन सहयोगको अपेक्षा गर्छु ।
नभएको कुरा पनि मिडियाबाजी गर्ने, राम्रो काम र विकास भन्दा पनि नराम्रो कुराको प्रचार गर्ने एउटा संयन्त्र र संस्कार खडा भएको छ । यस्ता कुराहरुले गर्दा पदमा बसेर काम गर्न खोज्ने र नयाँ योजना बनाउन खोज्ने हामीजस्ता कर्मचारीलाई धेरै समस्या भएको छ ।
विद्यार्थीले सिकेको सिप, आर्जनले नै सिटिईभिटीको शिक्षालाई निशुल्क बनाउन पनि सकिन्छ । जस्तै होटल म्यानेजमेन्ट र कृषि क्षेत्रमा यो संम्भावना उच्च छ ।
सिटिईभिटीका कार्यक्रमहरुको प्रचारप्रसार, मार्केटिङ र जनचेतना फैलाउन के गर्नुपर्छ ?
समाज परिवर्तन गर्न मिडियाका साथीहरुको भूमिका अहम् हुन्छ । अहिले तपाईं र मेरो भेट र कुराकानी पनि प्रचार प्रसारका लागि नै भएको हो । म स्पष्ट भन्छु कि सिटिईभिटीलाई स्वच्छ बनाउने काम मिडियाले नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ ।
यहाँ अध्ययन गर्न आउँदा स्कुल र कलेजमा झैँ हातमा कलम र झोलामा किताब बोकेर सैधान्तिक ज्ञान घाोकेर अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । यहाँ त हातमा कुटो, कोदालो, इन्जिनियरले पनि हेल्मेट, पन्जा र बुट लगाएर विकास निर्माणका काममा लाग्छु भन्ने अठोट बोकेर आउनु पर्छ । सिटिईभिटीमा श्रमलाई समान गर्ने व्यक्ति आउनु पर्छ अनि मात्रै रोजगार पाइन्छ । दर्ता चलानी गर्ने मात्रै जागिरे होइनन् । जागिरको विषयमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वन हुनुपर्छ । विद्यार्थी प्लास्टर, टायल, मार्बलकोे काम गर्न सक्ने हुन पर्यो ।
सिटिईभिटीको राजनीतिसँग सम्बन्ध छ कि छैन ? विशेष गरी नयाँ सरकार र मन्त्रीहरु आउँदा किन चर्चा र विवाद आउँछ ?
सिटिईभिटी स्वायत्त निकाय हो । यसमा परिषद् छ । मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्थ छ । मन्त्रीले नेपाल सरकारको दायित्व बोकेर आउने गछन् । कुन मन्त्री आउँदा कस्तो काम भएको छ भनी विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले आफु अनुकुल बनाउन खोज्छन् । हामीले कुन राजनीतिक दल आउदा कस्तो काम गरेर भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ । हाम्रो उदेश्य के हो ? त्यसमा आधारित हुन पायो भने राम्रो हुन्थ्यो । पहिला हामी आधारभुत, मध्यम स्तरीय दक्ष प्रविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । त्यसमा हामी सबै लाग्नु पर्छ । जागिरलाई समान प्रमाणिकरण गराउने हो । कसैले बारिमा गोलभेँडा फलाएर बेच्यो भने त्यो रोजगारी हो । जागीर र उद्यम विल्कुलै फरक कुरा हो । हामी जागिरलाई प्रथामिकतामा राख्छौँ । उद्यम गर्दैनौं । अनि हामीले कसरी सम्मान पाउँछौँ ?
युवा र शिक्षित बेरोजगारको कहालिलाग्दो स्थितिलाई न्युनिकरण गर्ने ४ वटा उपायहरु के–के हुन सक्छन् ?
१.६ खर्बको खानेकुराहरु आयत गरिन्छ । नेपालमै काम गर्ने बाताबरण बनाउन जरुरी छ । फोहोरलाई मल र मललाई धनमा परिणत गर्नसक्नु पर्छ ।
♦ समाजमा परिश्रमलाई कदर गर्ने सोच र संस्कार विकास गरौँ ।
♦ उत्पादन बृद्धि गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने
♦ उत्पादनको बजारिकरण गर्ने
♦ नयाँ प्रविधिहरु भित्र्याउने
युवा पुस्तालाई के सन्देश ?
युवाहरुका लागि चुनौती नै अवसर हो । रोजगार बन्ने हो भने बेरोजगार युवाहरुले सिप सिकेर रोजगार बन्न सक्छन् । यहाँ अध्ययन गर्न आउँदा स्कुल र कलेजमा झैँ हातमा कलम र झोलामा किताब बोकेर सैधान्तिक ज्ञान घाोकेर अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । यहाँ त हातमा कुटो, कोदालो, इन्जिनीयरले पनि हेल्मेट, पन्जा र बुट लगाएर विकास निर्माणका काममा लाग्छु भन्ने अठोट बोकेर आउनु पर्छ । सिटिईभिटीमा श्रमलाई समान गर्ने व्यक्ति आउनु पर्छ अनि मात्रै रोजगार पाइन्छ । दर्ता चलानी गर्ने मात्रै जागिरे होइनन् । जागिरको विषयमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वन हुनुपर्छ । विद्यार्थी प्लास्टर, टायल, मारर्बलकोे काम गर्न सक्ने हुन पर्यो । अब घर बनाउँदा नेपाली युवा जनशक्तिले बनाउने हो । कामको सम्मान गरौँ । चुनौती भनेको धेरै छ जहाँ चुनौती छ त्यहाँ अवसर छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो । प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुर संम्भावना छ ।
सिटिईभिटीको चुनौतिहरु के–के हुन् ?
जनशक्ति, दरबन्दी र बजेट कम छ । नेपाल सरकारको चाहना र हाम्रो आवश्यकता धेरै छ । उधोगी व्यवसायीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार सहकार्य गरेर हामी आगडि बढ्नु पर्छ । हामी ७० प्रतिशतलाई प्राविधिक शिक्षा दिने उद्देश्य छ । नेपाल सरकारको, कस्ता मान्छेलाई कस्तो कामको आवश्यकता छ त्यो थाहा पाएर हामी आगाडि बढ्ने हो । दक्ष जनशक्ति भएमा मात्र पर्यटन प्रर्वधन गरि समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ । पर्यटकलाई गरिने व्यवहार, एयरपोर्ट, ट्याक्सी, होटल, गाइड सबैले सबैलाई व्यवस्थित गरी पर्यटकको बसाई लम्ब्याउनु पर्छ । हामीले एयरपोर्टमा नै पर्यटक झर्न पाएको छैन । आफैँमा तानातान, खोसाखोस गरेर हैरान पार्नु हुँदैन ।
सिटिईभिटीले सम्बन्धन दिएका केही विद्यालय क्याम्पस र संस्थाहरु विवादमा आइरहन्छन् के अनुगमन फितलो भएको हो ?
हामी वर्षै पिछे अनुगमन गर्छौ । सम्बन्धन दिएकै कारण विवादमा आएका हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन । सम्बन्धन लिएर पछि सम्बन्धित संस्थाले पनि त्यसमा अनुगमन, नियमन त गर्नु पर्छ । सबै कुरा सिटिइभिटीलाई दोषी देखाएर उम्कन त पाइएन नी । यसमा सम्बन्धन प्राप्त सस्थाको प्रमुख दायित्व हुन्छ । सवै भन्दा पहिला हामी सवैमा इमान्दारीता हुनुपर्छ । देश विकास गर्ने हो भने इमान्दार हुनुपर्छ । निजी संस्थापनि दायित्वबाट पन्छिन भएन ।
सरकार, मन्त्री र सिटिईभिटीको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नयाँ एजेण्डाहरु र विवादहरु आउँछन् । राम्रा एजेण्डाहरुलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन ?
वर्तमान सरकार ५ वर्षे कार्यकाल भएको सरकार हो । दुई तिहाइको सरकार छ । सरकार, संस्था र व्यक्तिको आ–आफनो उद्देश्य हुन्छ । कस्तो काम गर्ने हो व्यक्तिमा निर्भर गर्ने कुरा हो । व्यक्तिको आचारणमा व्यवहारमा भर पर्ने कुरा हो । वर्तमान समयमा राम्रो काम गर्नेलाई राम्रो वातावरण भयो भने काम गर्न सहज नै हुन्छ । मेरो कार्य कालमा धेरै राम्रो कामहरु गरेको छु । म आएपछि ३५ प्रतिशत संस्थागत विकास भएको छ । विद्यार्थिलाई औद्योगिक प्रशिक्षण दिने काम सुरु गरेका छौँ । विराटनगर, बुटवल, बालाजु जस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुले काम गर्ने वतावरण भएको छ । यो एउटा संस्था थियो । यहाँ भएका सबै गाडीहरुको रातोे नम्बर प्लेटलाई परिवर्तन गरेर सेतो नम्बर प्लेटमा बदल्ने काम भएको छ । महिनाको १ लाख रुपैयाँ इन्धनमा बचत भएको छ । म आउदा ५ प्रतिशत छात्रबृत्तिको व्यवस्था थियो । अहिले १० प्रतिशत बनाएको छु । आगामी दिनमा आइटी सिस्टमको विकास गर्दैछौं ।
२०७५, २१ पुष, 10:08:45 PM